Breaking News Archives - Page2of 13 - News20 Media
Jan72022 by N20No Comments
महरालाई जेलको हावा खुवाएकी, रोशनी शाही अब, प्रचण्डको पछि लागिन्, माओवादीमा खैलाबैला !
पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई जेलको हावा खुवाएकी रोशनी शाही अब पार्टीका अध्यक्षमाथि नै गम्भीर आरोप लगाउन थालेकी छन् । महरामाथि ‘जबर्जस्ती करणी’को गम्भीर आ-रोप लगाएर चर्चामा आएकी शाही वेलावखत विवा’दमा आईरहन्छिन्। शाही प्रायः सामाजिक सञ्जालमा वि’वादित विषयहरु उठाउँछिन् र धेरैलाई गालि गर्छिन। यसै कारण पनि उनको चर्चा हुने गरेको छ। पछिल्लो समय उनी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध तिव्र असन्तुष्टि ब्यक्त गरिरहेकी छिन् । उनले प्रचण्डलाई आफनो छोरा प्रकाशको हत्या गरेको आरोप समेत लगाएकी छिन् । प्रकाशको मृत्युलाई प्रचण्डले चुनाव जित्ने माद्यम वनाएको भन्दै शाहीले फेसवुकमा प्रतिक्रिया ब्यक्त गरेकी छिन् । उनी त्यतिमा मात्रै अडिएकी छैनन्। पत्नि सितालाई विरामी अवस्थामै सिद्याएर आगामी चुनाव जित्न पनि उनले सुझाव दिएकी छिन्। उनले लेखेकी छिन्–‘प्रकाशको चिता सेलाउन नप...
Jan62022 by N20No Comments
जबर्जस्ती श्रीमानले3महिनाको गर्भपतन गराएर फरार भए पैसा लिएर आउछु भनेर श्रीमतिलाइ हस्पिटल छोडेर गए
जबर्जस्ती श्रीमानले3महिनाको गर्भपतन गराएर फरार भए पैसा लिएर आउछु भनेर श्रीमतिलाइ हस्पिटल छोडेर गए चितवनकि सबिना तामाङ्ग अहिले अस्पतालमा उपचार गराई रहेकी छिन । उनका श्रीमान बिनोद मगरले अस्पताल लिएर आएको भएता पनि श्रीमान पैसा लिएर आउछुभनी फरार भए पछि अहिले उनी उपचारको पैसा तिर्न नसकेर अस्पताल मै रहेकी छिन । सबिना र श्रीमान बिनोद दुबैले सल्लाहमा गर्भ पतन गराएको सबिना बताउँछिन ।औषधि खाएर गर्भ पतन गराए पछि पठेघरमा समस्या भएर अस्पताल आएको उनको भनाई छ । गर्भ पतन गराए पछि अहिले पाठेघर पाक्ने, फोहोर जम्मा हुने समस्या भए पछि त्यसैको उपचारका लागि श्रीमानले नै एक हप्ता अघि अस्पताल ल्याएको उनले बताईन ।अवस्था जटिल बने पछि केही दिन आईसियु मा पनि बस्नु परेको उनको भनाई थियो । अहिले त्यो सबैको खर्च करिव ५०/६० हजार भन्दा धेरै अस्पताललाई तिर्न बाकी रहेको सबिनाले बताईन । श्रीमान भने अस्पताल ल्याएर पैस...
२० वर्षकी केटीको फोटो देखाएर ४५ वर्षकी महिलासँग बिहे गराइदिन खोज्दा…
२० वर्षकी केटीको फोटो देखाएर ४५ वर्षकी महिलासँग बिहे गराइदिन खोज्दा… काठमाडौं।बिहे गर्नको लागि कुरा चलाउँदा केहुलालाई २० वर्षकी केटीको फोटो देखाइएको थियो तर बिहे गर्ने क्रममा मण्डपमा ४५ वर्षकी महिला बेहुली बनेर आएपछि बेहुला मण्डपबाटै भागेका छन्। युवकलाई २० वर्षकी केटीको फोटो देखाएर कुरा चलाउँदा उनले बिहे गर्न स्वीकार गरेका थिए तर मण्डपमा २ छोराछोरीकी आमालाई ल्याइएपछि बेहुला भागेर सिधै पुलिस स्टेशन गएर उजुरी दर्ता गराएका छन्। भारतको उत्तर प्रदेशको इटावाका शत्रुघ्न सिंह नामका युवकसँग यसरी धोका भएको भारतीय मिडियाले जनाएका छन्।दलालले उनलाई २० वर्षकी केटीको फोटो देखाएर उनीसँग बिहे गराइदिने भन्दै ३५ हजार रुपैयाँ पनि लिएका थिए । तर,बिहेको दिन मन्दिर पुगेका युवकले आफ्नो बिहे ४५ वर्षकी महिलासँग गराउन लागेको थाहा पाए । महिला २ छोराछोरीकी आमा भएको बताइयो।यो थाहा पाएपछि शत्रुघ्नले बिहे गर्...
आमा बित्दा छोराहरू आउँदै आएनन्, छोरीहरूले गरे अन्तिम संस्कार !
आमा बित्दा छोराहरू आउँदै आएनन्, छोरीहरूले गरे अन्तिम संस्कार ! एजेन्सी । हिन्दु परम्पराअनुसार आमाबुवाको मृत्युपछि दाहसंस्कार छोराले नै गर्ने चलन छ। अझ मृतकको शवलाई काँधमा राखेर आर्यघाटसम्म छोराले नै लैजानु पर्ने मान्यता छ। पछिल्लो समय छोरा नहुने अभिभावकको मृत्युपछि छोरीले अन्तिम संस्कार गरेका थुप्रै उदाहरण छन्। बेलाबखत छोराछोरी दुबै मिलेर दाहसंस्कार गरेका घटनाहरू पनि बाहिरिने गर्छन्। भारतको ओडिसा राज्यमा भने छोराहरूको अनुपस्थितिमा छोरीहरूले आमाको अन्तिम संस्कार गरेका छन्। भारतीय पत्रिका दैनिक भास्करका अनुसार मंगलाघाटमा बस्ने ८० वर्षीया जाति नायकको आइतबार मृत्यु भयो। उनको दाहसंस्कार गर्न छोराहरू नपुगेपछि चार छोरीहरू मिलेर अन्तिम संस्कार गरेका हुन्। उनका दुई छोरा र चार छोरीहरू छन्। श्रीमानको मृत्युपछि जातिले निकै दुःख गरेर छोराछोरीलाई हुर्काएकी थिइन्। उनले बाटोमा ठेला राखेर छोराहरूल...
सिसिटिभीमा देखिएकी सुन चोर्ने महिला आफुँलाई कतै भाइरल नगरिदिनु भन्दै सुन फिर्ता गरिन (भिडियो हेर्नुस्)
सिसिटिभीमा देखिएकी सुन चोर्ने महिला आफुँलाई कतै भाइरल नगरिदिनु भन्दै सुन फिर्ता गरिन (भिडियो हेर्नुस्) केही दिन अघि मात्र पोखरा महानगरपालिका ५ को जिरो किलोमीटरमा रहेको पामे चापाकोट सुनचाँदी पसलबाट एक जना महिलाले सुन चोरेर फरार भएकी थिइन् । उनले त्यहा सुन चोरेर बशिर निस्किए पछि हतारमा कुदेको दृश्य पसलमस भएको सिसि क्यामेराले देखाएको थियो । छोरा सुन लिन बहिर गएको बेला बृद्ध बुवालाई त्यो देखाउनु यो देखाउनु भन्दै मिठा मिठा कुरा गरेर सुन लिएर फरार भएको सुन पसलका वृद्धले बताएका थिए । एकछिन पछि आउछु भन्दै सुनको सिक्री लिएर महिला फरार भएकी थिइन् । त्यसरी सुन चोरी गरेर फरार भएकी महिलाको चोरी गर्दै गरेको रेकर्ड सिसि क्यामेरामा देखिए पछि उनको फोटो र भिडियो सामाजिक संजालमा निकै भाइरल भएको थियो । यसै बिच ३०/३५ वर्षकि जस्ति देखिने ती महिला अहिले सम्पर्कमा आएकी छिन । सुन पसलेलाई फोन सम्पर्क गरि आफुल...
माइत जान्छु भनेर हिडेकी श्रीमती सम्पर्क बिहिन, मोबाइलमा भेटियो नां’गै फो’टो’हरु(भिडियो हेर्नुस)
माइत जान्छु भनेर हिडेकी श्रीमती सम्पर्क बिहिन, मोबाइलमा भेटियो नां’गै फो’टो’हरु(भिडियो हेर्नुस) संखुवासभा जिल्लाको भोटखोला गाउपालिका ४ का नाम्जा भोटे अहिले आफ्नी श्रीमती बिगत ६/७ महिनाबाट सम्पर्क बिहिन भएको भन्दै मिडियामा आएका छन । संखुवासभा घर भै हाल धरान बस्दै आएका उनी आफ्नी श्रीमती तारा राई आफ्नी दिदिलाई पुर्याउन जाने भन्दै माइत गएको उनले बताए । माइती संखुवासभाको खादबारी जाने भनेर दिदी सगैँ हिडेकी तारा धरानबाट हिडे देखि आफुसगं, सम्पर्क बिहिन भएको नाम्जा भोटेले बताएका छन । श्रीमतिले संखुवासभा गएर आफू अबिबाहित भएको भनी नागरिता पनि बनाएको आफुले बुझेको नाम्जाको भनाई छ । वार्डमा गएर बुझ्दा अध्यक्षले आफुले तारालाई धरानमा रहेको ब्याक्ती तिम्रो श्रीमान होइन र ? भनी सोध्दा आफ्नो भिनाजु भएको भनी आफुलाई बताएकोले सिफारिस दिएको आफुलाई बताएको नाम्जाको भनाई छ । त्यसरी माइती गएर नागरिकता बनाएको थ...
बुवाले आफ्नै छोरीको स्तन टो,की टो,की मा,रे
बुवाले आफ्नै छोरीको स्तन टो,की टो,की मा,रे हेर्नुस भिडियो सामग्री :- अर्को पनि । नेपालका चर्चित गायक राजेशपायल राईलाई आ क्रमण गर्ने व्यक्तिको पहिचान खुलेको छ । अघिल्लो दिन अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरमा आयोजित विशेष सांगीतिक कार्यक्रममा राईमाथि पछाडी बाट अंगालो हालेर ल डाउन खोज्ने व्यक्ति दावा शेर्पा रहेको रहस्य खुलेको हो । अमेरिका निवासी विजय चाम्लीङ नाम गरेका एक नेपालीले आफ्नो फेसबुकमार्फत फोटो सार्वजनिक गर्दै संलग्नको पहिचान खुलाएका हुन् । उनको पोस्टमा उल्लेख भए अनुसार राजेशपायल माथि आ क्रमण गर्न स्टेजसम्म पुग्ने व्यक्ति शेर्पा हुन् । कलाकारप्रति मन पर्नु या नपर्नु बिचार आफ्नो निजी अधिकार भएपनि सांघातिक रुपमा जा ईला ग्नु ग लत भएको उनले पोस्टमा बताएका छन् । त्यस्तै घ टना भइरहेको स म्बेदन शील समय भिडियो मात्र बनाएर टुलुटुलु हेरेर मात्र बस्ने दर्शकहरुप्रति पनि उनले गुना सो पोख...
यी उपसचिवको २२ वर्षमा ३२ ठाउँमा घरजग्गा, १९ वटा बैंकमा पैसा
यी उपसचिवको २२ वर्षमा ३२ ठाउँमा घरजग्गा, १९ वटा बैंकमा पैसा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको २२ वर्षमा उपसचिव स्तरका एक कर्मचारी र उनकी पत्नीका नाममा ३२ स्थानमा घरजग्गा र १९ वटा बैंकमा रकम मौज्दात रहेको पाइएको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालय कैलालीका निमित्त वन निर्देशक हेमराज विष्टले अकुत सम्पत्ति जोडेको भन्दै उनीविरुद्ध ६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बिगोसहित सजाय कायम गरी विशेष अदालतमा बुधबार भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । विष्ट दम्पतीका नाममा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर, कास्की लगायत ३२ स्थानमा घरजग्गा रहेको पाइएको छ । कतिपय स्थानमा विष्टका नाममा, कतिपय स्थानमा उनकी पत्नीका नाममा, कतिपय स्थानमा दुवै जनाको नाममा घरजग्गा रहेको अख्तियारको आरोपपत्रमा लेखिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ बोनीले बताए । १९ वटा बैंकमा विष्ट दम्पतीका...
५ दिन देखि बे’पत्ता १६ वर्षीया युवतीको श’व फेला , ह’ त्या’को आ’रोपमा ४ जना प’क्राउ
५ दिन देखि बे’पत्ता १६ वर्षीया युवतीको श’व फेला , ह’ त्या’को आ’रोपमा ४ जना प’क्राउ शनिबार अछाम’मा मृ त फे’ला परेकी किशोरी’को ह’ त्या भए’को आ’ शं का गरिए’को छ । उन’को ह’ त्या गरे’को आ’रोपमा ४ जनालाई प्रहरीले प’क्राउ गरेको छ । परिवारले दिएको कि’टानी जा’हेरीको आधारमा ४ जना’लाई प’क्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामले जनाएको छ । अछामको मंगलसैन नगरपालिका वडा नम्बर ११ खिमडाकी १६ वर्षीया सृजना भण्डारी शनिबार मृ’त अवस्था’मा फे’ला परे’की थिइन् । उनी मंसिर २१ गतेदेखि बे’प’त्ता रहे’की थिइन् । आफन्तजनले दिएको कि’टानी जाहेरीको आधार’मा ४ जनालाई प’क्रा’उ गरी अनु’सन्धान भईरहेको प्रहरीले जनाएको छ । यो पनि पढ्नुहोस्, २१औँ शताब्दीको डिजिटल सँसारको उपहास गर्दै नेपाली काँग्रेसले १४औँ महाधिवेशनमा समेत पानी ट्याङ्कीलाइ मतपेटिकाको रूपमा प्रयोग गर्ने भएको छ । एकातिर उमेदवारहरू भोट माग्न ब्यस्...
बिहेकै बेला बेहुलाबेहुलीसहित चार जना मण्डप बाटै प,क्राउ के हो त कारण पढ्नुहोस् ।
बिहेकै बेला बेहुलाबेहुलीसहित चार जना मण्डप बाटै प,क्राउ के हो त कारण पढ्नुहोस् । सुनसरी- स्त्री र पुरुषका बीचमा पतिपत्नीको स,म्बन्ध कायम गराउने धा,र्मिक, सामाजिक कार्यलाई विवाह भनिन्छ । चलनचल्तीमा कतै कतै बिहे गर्ने भन्ने चलन पनि छ । विवाह गर्न उपयुक्त भनि तोकिएको उमेर भन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बा,ल विवाह भनिन्छ । नेपालमा का,,नुनतः विवाह गर्ने उमेर २० बर्ष छ । त्यसैले २० वर्ष भन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बा,ल विवाह भनिन्छ । शा,रीरिक र मा,,नसिकरुपमा परिपक्व नभई विवाह गर्नु र स,न्तान जन्माउँदा विविध सम,स्या आउन सक्ने भएकोले विवाहका लागि उमेरको हदब,न्दी तो,किएको बुझिन्छ यसै क्रममा सुनसरीको इटहरीमा बा,,लविवाह गरेको अभि,,योगमा बेहुलाबेहुलीसहित चार जनालाई प्र,हरीले प,क्राउ गरेको छ। उनीहरूलाई प,क्राउ गरेर बा,लविवाह विरु,द्धको मु,द्दा चलाइएको प्र,हरीले जनाएको छ इटहरी-२ स्थित हवा...
बोरा बोकी हिँडिरहेका ३ जना प्रहरीलाई देख्नासाथ भागे, बोराको सामान देखेर उड्यो प्रहरीको होस
पूर्व प्रहरी समेत रहेका एक पुरुषले गरे कसैले सोच्नै नसक्ने हर्कत, यस्तो कुरा सुनेर सबैलाई अचम्म बनाउँछ (भिडियो)
कमलाकै स्थानमा मृ’त भेटिएका ब्यक्तिको सु’सा’इड नो’ट भेटियो,आ’त्माह’त्या कि ह’त्या(भिडियो हेर्नुस)
भर्खरै जन्मिएको बच्चाको साँ’प्रा र खु’ट्टा चुँ’डा’एर झो’लामा फा’लिएको फे’ला(भिडियो हेर्नुस)
January 7, 2022 January 7, 2022 by N20
January 7, 2022 by N20